गीत–संगीतले नछुने मन सायदै होलान् -शम्भु बाछना राई - Naya Online
सोमवार, जेष्ठ ३, २०७८ (May 17th, 2021 at 4:39pm ) अन्तर्वार्ता, प्रवास, साहित्य
२०४६ साल साविक हसनपुर– २, उखुबारी (हाल हतुवागढी–९, भोजपुर) मा जन्मेका शम्भु बाछना राई गीतकार हुन् । उनका कयौं गीतहरू रेकर्ड भएका छन् उनी लेखनमा नि अब्बल छन् । वैदेशिक रोजगारीको युएइमा कार्यरत रहेका बाछना परदेशमा रहेर पनि आफ्नो देशप्रति उनको अगाध प्रेम छ । र, नै उनको गाउँघरमा हुने विभिन्न कार्यक्रम, विपदहरूमा आफ्नो कुनै कुनै रूपमा उपस्थिति जनाउने गर्दछन् । हतुवागढी अनलाइनका म्यानेजिङ डाइरेक्टरसमेत रहेर पत्रकारिताको समर्पित छन् । राईसँग आज उनको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा आज नयाँ अनलाइनले गरेको कुराकानीको अंश ।
प्रवास बसाई कस्तो चल्दैछ ?
आजसम्म यहाँहरूको शुभेच्छा र मायाले ठिकै छ भन्नु पर्यो । यद्यपि प्रवासमा हुँदा आफ्नो जन्मभूमि र गाँऊघरको यादले सार्है पिरल्दो रहेछ ।
सिर्जनाको समय कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
यसै त प्रायः ब्यस्त नै रहनुपर्छ प्रवासमा । आफ्नो दैनिकी सम्झौतामा चलेको हुन्छ । यसर्थमा कि कत्ति बजे उठ्ने ? कत्ति बजे सुत्ने ? अरुको हातमा लगाम हुन्छ । तथापी समय हाम्रो अनुकुलतामा नचले पनि हामी मानिस समयानुकूल भएर चलायमान हुनु पर्छ ताकी यो जीवन जिउनुको सार्थकता मिलोस् जस्तो लाग्छ । सिर्जनाहरू एउटा युगसँग समकालीन नै हुन्छन् मेरो बिचारमा त्यसैले “सिर्जना सधैं अमर हुन्छ !” प्रायः समय मिलेको बेला कोरिहाल्छु अरुबेला त दैनिकी छदैंछ ।
परदेशमा रहेर पत्रकारिता नि गरिरहनु भएको छ । कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?
हो अघि नै पनि भनिसकेँ प्रवासको बसाईमा समय नमिल्ने र प्राय व्यस्त नै भइन्छ । अहिले छापाखाना भन्दा पनि डिजिटल अर्थात अनलाईन न्युज पोर्टलहरूको पहुँच र क्रेज बढ्दो छ । यद्यपि पत्रकारिताको सामान्य आचार/संहिता र मुल धर्मलाई बिर्सेर टिआरपीको चंगुलमा फँसेर पित्त पत्रकारीता गर्नेहरूको भिड पनि उत्तिकै छ ।
प्रवास बसाईमा श्रमिकहरूले भोग्ने गरेका समस्याहरू र हुने गरेका गतिविधिहरूलाई विशेष चासोको विषय बनाएर मैले आफुले सकेसम्म स्वतन्त्र रूपले पत्रकारिता मार्फत पस्किने गरेको छु । योसँगै मैले हतुवागढी अनलाईन डटकमको इडिटिङ आफैले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि भएकोले समय व्यवस्थापनमा चुनौती धेरै नै छ ।
गीत कस्तो बेला लेख्नुहुन्छ ?
गीत भनेको भावना वा कुनै सन्देश व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो । विभिन्न खाले गीतहरू लेखेको छु । केही आफैँ भावनामा बगेको बेला लेखेको छु जस्तै कि “मुग्लान लागे उभौलीमा…” जहाँ परदेशका बिरहहरू उन्ने प्रयास गरेको छु । कतिपय गीत साथीहरूले “सिचुएशन” अथवा यस्तो खालको गीत लेखिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध आउँछ त्यही अनुसार कोरिदेको छु । समग्रमा भन्नु पर्दा गीत लेखनमा म मुडी नै छु ।
जब गीतले पुर्णता पाउँछ, त्यो बेलाको अनुभुति बताइदिनुस न ?
जब गीतमार्फत भन्न खोजिएको कथालाई भगवानरूपी दर्शकश्रोताहरूले रुचाइदिनु हुन्छ त्यो अनुभुतिमा एक खालको “किक्” मिल्दो रहेछ जसले गर्दा फेरी पनि अर्को सृजना पस्किनलाई प्रेरणा जगाउँदो रहेछ ।
हामीले गीत किन लेख्ने ?
गीत भावनाहरू व्यक्त गर्ने मात्र नभई कथा भन्ने अर्को माध्यम पनि हो । शब्द साँच्चिकै शक्तिशाली हुन्छ । “क्रान्तिको बिगुल फुक्न पनि गीतकै माध्यमलाई क्रान्ति गर्नेहरूले साथ लिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । गीतमा गाईने शब्दहरू मन र मस्तिष्कमा यसरी बसिदिन्छ कि त्यो तपाईको आफ्नै भावना बिचार बन्न पुग्छ । गीत/संगीतले नछुने मन हुदैन । त्यसकारण आमजनमानसको मानस्पटलमा रहन गीत लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
प्रायः लोकलयको गीत लेख्नुहुन्छ, यसमा के मज्जा छ ?
गाँऊघरमा जन्मे हुर्केकोले होला अझ लोकमा पनि पुर्वेली लोकभाकाहरूमा धेरै मन पर्छन् । जहाँ मैले मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषा र जनजीवनलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएको छु । प्रवास बसाईमा तिनै लोकधुनहरू गुञ्जिँदा साकेला, पालाम आदिमा नाँचेको रिभाइव हुन्छ । लोकलयको गीतको बेग्लै मज्जा छ । यद्यपि अन्य ढाँचाका गीतहरू पनि लेखेको छु अब रिलिज हुन लागेको “भाइरल क्वीन टिकटकवाल” युवा गायक/संगीतकार भीम राईको स्वरमा छिट्टै आउदैछ । यो डिजे टाइपको गीत हो ।
गीतसङ्गीत बिनाको दुनियाँ कस्तो होला ?
गीतसंगीत बिनाको दुनियाँ कल्पना भन्दा बाहिर होला । गीत–संगीतले नछुने मन सायदै होलान् । चाहे दुखमा होस् वा खुशीमा होस्, दुःखका आँशुहरूमा अनि हर्षका हाँसोहरूमा वा क्रान्तिका ज्वालाहरूमा, अध्यात्मका आत्म–सन्तुष्टिहरूमा पनि संगीत बगेकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
गज्जबको जिज्ञासा राख्नु भो । म योजना खासै बनाउँदिन तर समायानुकुल भएर प्राथमिकताका आधारमा केही योजना बनाउने गर्छु । यहि नै भन्ने त छैन । यद्यपि प्रवासिनु अघि पूरा नभएको एउटा काम बाँकी छ । मैले अंग्रेजी साहित्यमा एम.ए. अध्ययन पूरा गर्न पाएको थिइनँ । पहिला त्यसैलाई पुर्णता दिन्छु । बाँकी त्यसपछि ।
हाम्रो गन्थनलाई झर्को नमानी सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु भो, यहाँहरू सम्पुर्ण दर्शक/श्रोता अनि शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु । स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहनुहोस् ।